Iindaba-Uqeqesho kwiZakhono zoMsebenzi kunye neSatifikethi seMfundo seWelders kunye nabaSebenzi abaPhezulu
Uqeqesho kwiZakhono zoMsebenzi kunye neSatifikethi seMfundo seWelders kunye nabaSebenzi abaPhezulu
Inkqubo yokuwelda ifuna ukuba abasebenzi bajoyine iinxalenye zesinyithi ngokunyibilikisa iziqwenga zentsimbi kunye nokuzidibanisa. Ngokwe-Bureau of Labor Statistics, i-welders inamathuba amahle engqesho, nangona kungasayi kubakho ukukhula okukhawulezayo kule ndawo. Kuya kufuneka ufumane uqeqesho ngaphambi kokuba usebenze njengowelitha. Uqeqesho luyafumaneka kwiikholeji zasekuhlaleni, kwizikolo zobugcisa nakwizikolo eziphakamileyo. Ukulungiselela ukusebenza njengowelda kuthatha iiveki nje ezintandathu.
Ukufundwa kwemibhalo yinkqubo ekhokelela kwizifundo evumela abafundi ukuba bafunde kwaye batolike iisimboli zewelding kunye nemizobo yendibano ebandakanyiweyo kwiiplani ezininzi ezisetyenziswa kwimizi-mveliso. Ngokufunda ukufunda iiplani, i-welders ziyakwazi ukuchonga ububanzi, ukuphakama kunye nobude beprojekthi, ukutolika i-welding kunye nezinye iimpawu kunye nokuzoba izinto ezibonisa ngokuchanekileyo iinkcukacha.
I-Welders kufuneka ikhululeke ngejometri kunye namaqhezu. Kuya kufuneka bayazi indlela yokubala iifomula ezilula kunye nokuthatha imilinganiselo echanekileyo. Ezi zakhono zibalulekile kuba iiwelders kufuneka zichaneke ukuthintela iimpazamo ezibiza kakhulu. IiWelders zihlala zisebenzisa iifomula ezifanayo, ezenza kube lula ukuba ii-welders ezintsha zibambe ngokukhawuleza.
I-Chemistry kunye neFizikiki
I-Welding sisakhono sokuba imigaqo-siseko yobunjineli isetyenziswe kuyo, ke kuya kufuneka wazi iziseko zekhemistri kunye nefiziksi. I-Chemistry kunye ne-physics zizazinzulu ezifunda amandla kunye nomba kunye nefuthe lokunxibelelana kwazo. I-Welding kukudityaniswa kweesinyithi kunye ngokudibanisa, ngoko ke kukho imichiza kunye nokusabela okwenzekayo emzimbeni. Ngokufunda i-chemistry esisiseko kunye ne-physics, uya kufumana ukuqonda ngokubanzi malunga nokwenzekayo xa isinyithi shushu kwaye sibopha kunye.
I-Welding ibandakanya ukulungisa isinyithi, ukujonga ukuba irusi, ukusebenzisa izixhobo ezifanelekileyo zokhuseleko kunye nokunyibilikisa iziqwenga zentsimbi kunye. I-Welders kufuneka iwazi umahluko phakathi kwentsimbi elungileyo kunye nengalunganga. Kuya kufuneka bayazi indlela yokumamela isinyithi ngokusondeleyo ngexesha lenkqubo ye-welding kuba yile ndlela baya kwazi ngayo ukuba iintsimbi zi-welding ngokufanelekileyo. IiWelders kufuneka ziyazi indlela yokumamela ngenyameko kwizixhobo zazo zewelding. Le yenye indlela yokulinganisa ukuba inkqubo yokuwelda ihamba njani.
Ixesha Post: Nov-10-2020